Ngwongwo ndi na-eto eto na-achota 29% na 2020, CDC Survey na-egosi ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | NTOKWU
Ihe nchoputa ohuru nke CDC weputara gosiputara 29 pasent nke ntorobịa na-agbapu site na 2019 ruo 2020, na-eweta ya na ọkwa nke ikpeazụ a hụrụ tupu 2018. N'ezie, CDC na FDA ahọrọla ụzọ ọzọ iji gosipụta nsonaazụ.
Nsonaazụ ahọpụtara (mana ọ bụghị data ha si) bụ akụkụ nke akụkọ CDC bipụtara na Septemba 9 - otu ụbọchị ahụ bụ oge maka ndị na-emepụta vaping iji nyefee ngwa ngwa ụtaba Premarket ma ọ bụ wepu ngwaahịa ha n'ahịa. Ihe data a ga - adi, tinyere nyocha nke nsonaazụ ya niile, oge ufodu na December.
Usebọchị gara aga 30 (nke a na-akpọ "ojiji ugbu a") n'etiti ụmụ akwụkwọ kọleji dara site na 27.5 pasent ruo 19.6 pasent, na ọdịda n'etiti ụmụ akwụkwọ sekọndrị dị egwu karịa, site na 10.5 ruo 4.7 pasent. Nke ahụ bụ ozi ọma, nri? Ọfọn…
"Ọ bụ ezie na data ndị a na-egosi mbelata nke iji sịga na-eme ugbu a kemgbe 2019," ndị nyocha CDC na FDA na-ede, "nde ndị ntorobịa US 3.6 ka na-eji ụtaba e-siga ugbu a na 2020, yana n'etiti ndị ọrụ ugbu a, ihe karịrị asatọ na 10 kwuru na iji sịga na-esi ísì ụtọ. ”
Ndị na-ede akwụkwọ na-atụ aro na n'ihi na ngwaahịa ndị a na-anụ ụtọ, ka na-agbapụta afọ iri na ụma agaghị adaba na ọkwa (efu) nke ga-egbo CDC na FDA ụtaba na-achịkwa poohbahs. N'ihi ya, akụkọ ahụ na-enye nkọwa zuru ezu banyere ụdị ụtọ ụtọ nke ndị ọrụ a oge ụfọdụ, na-arịba ama na mkpụrụ osisi, Mint, na menthol bụ ụdị ụtọ kachasị ewu ewu n'etiti ndị niile ntorobịa na-eto eto. Nsonaazụ na ekpomeekpo na-eme ka ndị ntorobịa jiri ya na-agwụ ike, mana ụfọdụ nyocha ahụ na-atọ ụtọ.
Iji maa atụ, n’etiti “ndị na - ejizi pods na cartridges ekpuchido flavored ugbu a, ụdị ekpomeekpo ndị a na - ejikarị bụ mkpụrụ osisi (66.0%; 920,000); mint (57.5%; 800,000); menthol (44.5%; 620,000); na swiit, ihe ụtọ, ma ọ bụ ihe ụtọ ndị ọzọ (35.6%; 490,000). ”
Ma Juul Labs, nke na-eme ihe e chere na ọ bụ vape kachasị ewu ewu n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma, ewepụwo mkpụrụ osisi ha n'ahịa karịa otu afọ tupu e mechaa nyocha ahụ. Onweghi otu n'ime ndi isi iwu ndi ozo nke prefilled pods na-ere nkpuru osisi ma obu swiiti n'oge ekpughere. Nke ahụ na-egosi na nnukwu "ndị ọrụ ugbu a" na-agbapụta ngwaahịa isi awọ na nke oji dị ka Juul dakọtara nke ndị nrụpụta na-akwadoghị.
"Ọ bụrụhaala na e-sịga ọ bụla na-atọ ụtọ na-ahapụ n'ahịa, ụmụaka ga-etinye aka na ha ma anyị agaghị edozi nsogbu a," Mgbasa Ozi maka baccomụaka baccotaba Na-enweghị Matthewmụaka Matthew Myers kwuru. N'ezie, nke ahụ metụtara ahịa ojii. Amachibidoro flavors agaghị eduga na abstinence, dị nnọọ ka ịzụrụ si ọhụrụ na-enyo enyo na isi mmalite.
Akụkọ CDC na-ekwu okwu banyere ịkọwapụta na iji ngwaahịa nwere ike ịwepụ sitere na 2.4 pasent na 2019 ruo 26.5 pasent na 2020 - mmụba 1,000%! - na-akọwaghị na ngwaahịa ndị ahụ bụ azịza ahịa ojii na mkpebi mkpebi ndị nrụpụta usoro iwu ịhapụ ekpomeekpo, na mgbe e mesịrị na FDA mkpebi prioritize mmanye megide pod-dabeere na ngwaahịa. (Enwere echiche ọgbaghara na-enye obi ụtọ nke na-egosi mkpebi FDA iji wepu vapo vaap site na nduzi mmanye Jenụwarị 2020 bụ nnwale iji hụ ma ọ bụrụ na ahịa vape na-ezighi ezi ga-aza ngwa ngwa. O mere.)
Isi okwu bụ na ikupu ụlọ akwụkwọ sekọndrị gbadara ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ, na ụlọ akwụkwọ sekọndrị vaping site ihe karịrị ọkara. Eziokwu ahụ bụ na ihe karịrị pasent 80 nke ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eji ngwaahịa ndị na-ekpo ọkụ na-acha uhie uhie bụ ihe na-acha uhie uhie, n'ihi na anyị amatala na ọtụtụ ndị toro eto na-ahọrọkwa akwụkwọ ndị na-abụghị ụtaba, na ụtọ ahụ abụghị otu n'ime isi ihe kpatara ụmụaka ji agbachapụ.
E nwere nsogbu ndị ọzọ na NYTS ma e wezụga iche na ụtọ. CDC ewepụla ajụjụ a kapịrị ọnụ banyere ịpụ na mmanya na nyocha ahụ, na-ahapụ ndị sonyere ka ha kpebie ma ajụjụ ndị ahụ metụtara THC na nicotine vapes. Anyị amaghị ụmụaka ole na-eme nyocha a bụ THC vapers, n'ihi na CDC chere na ha niile na-ekpochasị nicotine, na-akọkwa nsonaazụ ha dịka ha dị.
O nwere ike ịbụ na (ezi uche) na-atụ egwu iwu na-ezighi ezi THC vape cartridges nke kpatara "EVALI" mere ka ọtụtụ ndị na-amị mmanụ na-amị afọ ụlọ akwụkwọ kwụsị iji ngwaahịa ndị ahụ. Anyị amaghị na nnukwu akụkụ mmanu mmanụ mmanụ na-egwu na 2018-19 "nsogbu ntorobịa na-efe efe," mana anyị maara na ngwaahịa ndị ahụ na-enwetakarị ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto na-eto eto n'oge ahụ (2017-2019) ).
Nsogbu ọzọ na nsonaazụ mmalite: CDC kpebiri ịghara ịnye ọnụọgụ ise siga nke mbido 2020. N'afọ gara aga, ị cigaretụ sịga ụbọchị 30 riri ike na obere ala nke 5.8 pasent maka ụmụ akwụkwọ kọleji, yana naanị 2.3 pasent n'etiti ụmụ akwụkwọ sekọndrị. Omume ahụ ọ gara n'ihu na 2020-ka mbelata nke vapu mere ka ọnụọgụ sịga na-egbu egbu gbakwunye ya? Anyị agaghị ama ruo oge ụfọdụ na Disemba, n'ihi na ihe ọ bụla kpatara, CDC achọghị ka anyị hụ nsonaazụ ndị a ugbu a.
"Omenala" nke ịhapụ nsonaazụ mbido nke sitere na NYTS bidoro na 2018 site n'aka mgbe ahụ-Commissioner Commissioner Scott Gottlieb, bụ onye chọrọ igosipụta ihe gbara ọkpụrụkpụ iji kwado nkwupụta ya na "nsogbu" na-eto eto na-eto eto na-aga n'ihu. Ma ọ nọrọ ọnwa ọtụtụ ịtọ ntọala ahụ tupu wepụta ọnụọgụ iji kwado okwu rụrụ arụ ya.
"Ekwenyere m na e nwere ntiwapụ nke iji ndị ntorobịa eme ihe," Gottlieb kwuru na Septemba 11, 2018. "Anyị nwere ezigbo ihe mere anyị ga-eji kwubie nkwubi okwu a dabere na ọnọdụ na data anyị ahụgoro, ụfọdụ n'ime ha ka ga-amalite ma ga-abụ arụ ọrụ na ọnwa ndị na-abịanụ ma kwupụta n'ihu ọha. "
Gottlieb yiri egwu machibidoro ngwaahịa ndị na-esi ísì ụtọ wee dọpụta ngwa ahịa c-store kachasị ewu ewu na ahịa. Otu izu ka e mesịrị, FDA kwupụtara mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụụ ọhụrụ. The centerpiece bụ a nkwafu TV azụmahịa akpọ "Ọrịa," nke amamiihe uche na ụtaba akara ọfịs na FDA o doro anya na ọ ga-emenye ụjọ na-akpali akpali-achọ afọ iri na ụma pụọ ​​vaping.
Mgbe emesiri kpochapu nsonaazụ mbu 2018 NYTS na November, usoro mgbasa ozi-nke Gottlieb mere, mkpọsa mgbasa ozi, na mkpọsa na-adịghị agwụ agwụ nke mkpọsa mgbochi vaping sitere na otu ndị na-emegide ụtaba. Ọnụ ọgụgụ nke "ụlọ akwụkwọ sekọndrị" dị ugbu a si na 11.7 ruo 20.8 pasent!
Ihe ụlọ ọrụ ndị a emeghị-maka na ha emeghị chọrọ to - bu ihe gbara ya gburugburu. Ihe akaebe nke ntiwapụ na-eyi egwu na-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'iji ụbọchị 30 eme ihe, nke bụ ụkpụrụ na-eche echiche iji tụọ omume ọgwụ ọjọọ. Iji ihe otu ugbo n’ime onwa gara aga abughi ihe akaebe nke iji ya eme ihe, ma ya fọdụzie “ihe riri ahụ”. Ọ nwere ike igosipụta ihe ọ bụla na-enye nsogbu karịa fad.
Jiri nlezianya nyochaa nsonaazụ 2018 NYTS nke ndị nchọpụta si Mahadum New York (na mahadum ndị ọzọ) gosipụtara na pasent 0.4 nke ndị nyocha ahụ ejitụbeghị ụtaba ndị ọzọ. na banye na 20 ma ọ bụ karịa ụbọchị n'ọnwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ sekọndrị na-a smụbu anwụrụ.
"Vaping mụbara n'etiti ndị ntorobịa US na 2018 karịrị 2017. Ihe mmụba a bụ ihe atụ nke obere [oge gara aga-30 ụbọchị] vaping ugboro ugboro na nnukwu poly-ngwaahịa eji, yana obere mgbasa nke vaping n'etiti ndị na-agakarị mana ụtaba naap na-adịghị mma," the ndị edemede kwubiri.
Mgbe 2019 NYTS gosipụtara mmụba ọzọ, site na 20.8 ruo 27.5 pasent, mmeghachi ụjọ nke ndị ọchịchị na ndị mgbasa ozi nwere ike ịkọ; ọ bụ n'ezie naanị ncheta akwara. Ma akụkọ ahụ agbanwebeghị. Otu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Britain nke lere anya na nsonaazụ nke 2018 na 2019 CDC kwetara na nyocha nke otu NYU.
Ha dere, sị, "Iji oge eme ihe na 1.0% nke ndị na - amaghị ụtaba na 2018 na 2.1% na 2019," ka ha dere. "N'ime otu ụtaba emeghị ka ndị ụtaba ụta-30 gara aga na 2019, 8.7% kwuru na agụụ na-agụ agụụ na 2.9% kwuru na ha chọrọ iji n'ime nkeji 30 nke edemede."
Nsonaazụ ndị ahụ egosighi na ụmụaka "ejidere" ma ọ bụ "riri ahụ," dị ka Mgbasa Ozi maka Totaba-Free Kids na Eziokwu Initiative kwupụtara na mbipụta ha. Oge gara aga-ụbọchị 30 na-anọchitekarị nnwale, ọ bụghị iji ya eme ihe. "Add Addụ ọgwụ ọjọọ" adịghị emetụta nnukwu akụkọ ihe mere eme otu afọ ma daa pasent 30 na-esote-ma ihe ndị na-eto eto na-eto mgbe nile ma na-ada ngwa ngwa n'ụdị dị otú ahụ.
Eziokwu a na-ekwughi ekwupụta bụ na ndị na-eto eto America anaghị asọpụta karịa ma ọ bụ karịa karịa ndị si UK ma ọ bụ ebe ọ bụla. Mana ndị ọchịchị US kọwara ịkwapu ndị na-eto eto n'ụzọ a chọrọ iji kpasuo ndị okenye ụjọ. Ọ bụrụhaala na ha ga-enwe ike imezu ebumnuche ahụ, ọ nweghị ihe ga-agbanwe.
Kpoo Sịga, E Sịga ọnya Pack, Okingụ Sịga Ọzọ, E Liquid Alụlụụ Sịga, Newport E sịga, Epen,